虚拟专用网（VPN）：Tari-dalana tena tsara ho an'ny mpanaradia
Ny服务虚拟专用网络（VPN）dia somary lohahevitra mafana amin’izao fotoana izao satria ny tsiambaratelo aterineto dia miditra anaty afo avy amin’ny lalana maro。 Ny orinasa dia miezaka manangona antontam-baovao maromaro kokoa amin’ny mpampiasa azy ireo raha toa ka manjary manjavozavo loatra izy（Tadiavo ohatra？.
Nandritra ny taona maro dia nampiasa fitaovana lehibe玩具ny Facebook izahay，Google，ny rindrambaiko Microsoft ary ny fandrosoana haingana kokoa nyteknôlôjiadia nanosika ireo orinasa ireo hamahaba ireo mpampiasa ireo kaontimtra-.
Ary raha toa ny Governemanta dia mey miezaka ny hifehy ny toe-draharaha，amin’ny tranga sasany dia izy ireo ihany no meloka amin’ny fahotana mitovy amin’izay sahirana amin’ny orinasa-fampidirana ny tanambaranasy tanambaronsy anary安哥纳·齐·曼基纳.
Noho izany，inona no azontsika atao mba hiarovana ny fiainantsika manokana amin’ny aterineto吗？ ny valiny dia mitondra antsika any amin’ny lohahevitry ny VPN.
0.0.1 专家提示 Ny mpamatsy sasany eny an-tsena dia mety tsy ho marina amin’ny fanolorana fanolorana azy。 Mitaky izy ireo hanolotra servisy ara-pahasalamana any amin’ny toerana samihafa，fa ny sasany amin’izy ireo dia tena virtoaly。 Raha lazaina amin’ny teny hafa dia mety mifandray amin’ny mpizara iray any amin’ny firenena iray ianao，fa mahazo adiresy IP nomena any amin’ny firenena hafa。 Ohatra，ny mpizara任何Sina dia mety ho avy任何Etazonia. Ratsy izany satria midika izany fa mandalo amin’ny tambajotra maromaro any amin’ny faritra samihafa manerana izao tontolo izao ny data mandra-pahatongan’ny farany。 Tsy misy antoka fa ny mpikirakira网络犯罪分子，maso-maso miafina miafina，na mpandika ny zon’ny mpamorona zon’ny mpamorona dia manana ny tanany amin’ny iray amin’ireo serivisy mpanelanelana ireo. Mba hialana amin’ity olana ity dia tokony hanao fizahana tsara ny mpampiasa mba hanamarinana ny tena toerana misy ny VPN。 Ireto misy fitaovana efatra azonao ampiasaina amin’ny： Ping测试工具Any’ny CA App Synthetic Monitor Traceroute工具，非CA App Synthetic Monitor BGP工具包 命令提示符工具和CMD替代Windows – BestVPN.co的Hamza Shahid 安全
1.1.1 拉哈·芬蒂尼娜（Raha Fintinina） –
1.1.2 Fampitoviana协议VPN –
1.6 5-Fikirakira an’ny隧道点对点（PPTP）
3.2 Ny fifandraisana互联网
3.3 Inona的nampiasako VPN?
4 VPN famoahana matetika（常见问题）
5 Famaranana：Mila VPN ve ianao?
Ny mpamatsy sasany eny an-tsena dia mety tsy ho marina amin’ny fanolorana fanolorana azy。 Mitaky izy ireo hanolotra servisy ara-pahasalamana any amin’ny toerana samihafa，fa ny sasany amin’izy ireo dia tena virtoaly。 Raha lazaina amin’ny teny hafa dia mety mifandray amin’ny mpizara iray any amin’ny firenena iray ianao，fa mahazo adiresy IP nomena any amin’ny firenena hafa。 Ohatra，ny mpizara任何Sina dia mety ho avy任何Etazonia.
Ratsy izany satria midika izany fa mandalo amin’ny tambajotra maromaro any amin’ny faritra samihafa manerana izao tontolo izao ny data mandra-pahatongan’ny farany。 Tsy misy antoka fa ny mpikirakira网络犯罪分子，maso-maso miafina miafina，na mpandika ny zon’ny mpamorona zon’ny mpamorona dia manana ny tanany amin’ny iray amin’ireo serivisy mpanelanelana ireo.
Ping测试工具Any’ny CA App Synthetic Monitor
Traceroute工具，非CA App Synthetic Monitor
– BestVPN.co的Hamza Shahid
Maro ireo tolotra VPN androany no manomboka mampihatra fepetra fiarovana bebe kokoa mba haha​​soa ny mpampiasa azy。 Nanomboka ny ankamaroany mba hanakanana ny fanangonana tahirin-tserasera sy ny fitiliana an-tserasera，saingy nanitatra ny fampidirana fanakanana adiresy ary amin’ny sasany aza dia vahaolana amin’ny viriosy.
Sarotra kely ny mamaritra ny fomba fiasa VPN raha tsy misy ny antipiriany ara-teknika。 Na izany aza，ho an’ireo izay maniry ny，foto-kevitra fototra，VPN dia mamorona tonelina azo antoka avy amin’ny fitaovana ho an’ny mpizara VPN ary avy eo mankany amin’ny tranonkala manerantany.
Amin’ny antipiriany bebe kokoa，任何VPN dia mametraka fanambarana fifandraisana amin’ny fitaovana。 Ity fitsipika ity dia mamaritra ny fetran’ny fomba hivezivezin’ny angona avy amin’ny fitaovana amin’ny服务器VPN。 Misy vitsivitsy misy协议VPN vitsivitsy izay mahazatra，na dia samy manana ny tombony sy ny tsy fahampiana azy aza ny tsirairay.
协议不存在，协议不存在，协议不存在，协议不存在，VPN协议不存在。 Ny sasany dia haingana kokoa，ny sasany dia maivana，ny sasany azo antoka，ny hafa tsy izany。 Ny safidinao dia miankina amin’ny fepetra takinao，ka mety ho fizarana tsara ho anao ny mifantoka raha toa ka mampiasa VPN ianao.
拉哈·芬蒂尼娜（Raha Fintinina） –
开放VPN：Protokolin’ny开源izay mahatratra haingam-pandeha matetika dia manome fanohanana matanjaka mafy.
OpenVPN dia是一种开放源代码VPN协议，适用于Any izany dia heriny ary koa ny fahalemena mety aminy。开源材料azo atokisana amin’ny olona rehetra，izay midika fa tsy vitan’ny mpampiasaara-dalànaampiasaina sy hanatsara izany，fa ireo izay tsy manana fikasana lehibe dia afaka manara-maso izao manysyny annynyny fahalem.
Naizany aza，nanjary nanjary lehibe indrindra和OpenVPN ary iray amin’ireo fiarovana azo antoka indrindra。 Izy dia manohana ny ambaratonga avo lenta avo indrindra，anisan’izany izay heverina ho ny’asam-panavotana’256位izay mitaky ny fanamafisana ny 2048位RSA，ary ny算法XHUMX位SHA160哈希.
Noho ny loharanom-baovao misokatra dia nampifanaraka koa izy io amin’ny fampiasana amin’ny sehatra rehetra amin’izao fotoana izao，avy amin’ny Windows sy iOS amin’ny sehatra iraisam-pirenena hafa toy ny routers ana sy树莓派.
Indrisy fa ny fiarovana avo dia manana ny ratan-drivotra ary ny OpenVPN dia matetika hita fa miadana be。 Na izany aza dia betsaka kokoa ny fifanakalozam-barotra，satriaara-dalànafa ny avo kokoa ny tahan’ny fampitomboana ampiasaina，ny fotoana bebe kokoa handraisana ny fizotran’ny data.
Ny协议隧道2层（L2TP）无协议，即第2层转发协议（L2F）。 Indrisy anefa，satria tsy nahafeno fepetra，famaha，fifandraisana dia matetika nozaraina miaraka amin’ny fiarovana IPsec。 Hatramin’izao，io fitambaran-javatra，io dia heverina ho toy ny fiarovana sy tsy manana漏洞hatramin’izao.
Zavatra iray tokony hanamarihana fa io协议ia dia ampiasa UDP ao’mininny seranan-tsambo 500，izay midika fa ny tranonkala izay tsy mamela ny varotra VPN dia afaka mamantatra sy manakana azy mora foana.
Ny SICP（安全套接字隧道安全套接字）dia iray amin’ireo olona tsy dia fantatra loatra eo amin’ny olona tsy mahazatra，saingy tena ilaina izy io satria efa，nosedraina tanteraka，nosedraina ary nifatotra tamin’ny rehe hatdramirirana ‘i Vista SP1.
Tena azo antoka koa izany，amin’ny fampiasana ny SSL / TLS 256位SSL / TLSary ny 2048位。 Fa indrisy fa tompon’ny Microsoft ihany koa，noho izany dia tsy misokatra ho an’ny fanadinam-panjakana izany-Indray，tsara sy ratty.
否Microsoft密钥交换版本2（IKEv2）是Microsoft的Microsoft，还是Cisco Protocopy Tonelina。 IPSec加密。 Ny fahaizany miverina amin’ny fampifandraisana ireo fifandraisana very dia nahatonga azy ho be mpitia eo amin’ny olona izay manararaotra azy noho ny fampielezana VPN amin’ny finday.
Ny协议协议点对点（PPTP）隧道协议VPN。 ny协议taloha VPN。 Na Dia mbola misy aza ny fampiasana sasany，dia nidina an-dalambe io lalana io noho ny fiakarana midadasika be loatra amin’ny filaminana.
Manana izany漏洞ary nalain’ireo olon-dratsy sy raty fanahy ela tany aloha，ka tsy mahafinaritra intsony。 Raha ny marina，ny fahasoavana ihany no maharesy azy。 Araka ny nolazaiko taloha，Ny fiarovana azo antoka kokoa dia nyfihenan-dàlanahaingana kokoa dia ny mahita ny fihenanam-bahoaka.
Ny fomba tsotra indrindra hamaritana ny famaritana izay azoko eritreretina dia mety hanakorontana ny fampahalalam-baovao ka ny olona iray izay曼纳拉.
Makàohatra iray tokana-猫.
256位Raha ampihariko amin’ny teny iray ny rakitra，dia lotototry ny lozam-pifamoivoizana tanteraka sy tsy hay sakanana izy io。 Na dia ny超级计算机mahery indrindra eto an-tany aza dia hitondra an-tapitrisany an-tapitrisany amin’ny fiezahana hamaha io teny tokana io miaraka amin’ny famenoana 256位izay namyharina taminy.
Ankoatra izany，nymbaratongam-pehezantenim-panandevozana dia，endriny，ka noho izany dia tsy manolotra，antsasaky，fiarovana和famenoana 128位，256位。 Na Dia mbola marefo aza ny manam-pahaizana dia mino izany Ny kapila 128-bit dia ho tapaka tsy ho ela.
Ireo fomba fitahirizana sy tanjaka ireo dia ampiharina matetika，arakaraka ny fampiharana ampiasaintsika，玩具ny mailaka，ny navigationur，na programa hafa。 VPNs amin’ny ankilany kosa dia mamela antsika hisafidy izay karazan-tsindrana tadiavintsika，satria ny karazan-tsika fidintsika dia hisy fiantraikany amin’ny fahombiazan’ny VPN.
Amin’izany fomba izany no ahafahantsika manitsy ny fampisehoana ny servisy VPN。奥哈特拉（Ohatra），萨萨尼·迪·马蒂（mansy malfy ny hamandrihana ary ho vonona hanhanolotra haingam-pandeha）。纽约哈法迪亚·梅里·玛尼里·哈甘姆·潘德哈·阿里·玛奈基尼·桑丹尼·范加尼·科科亚.
Ireo rehetra ireo dia ilaina sy voakitika amin’nyalàlan’nyfanoratana，satria rehefa miditra amin’ny tranokala VPN ianao，ny angona alefanao rehefa miezaka mamakafaka ny Internet dia mamakivaky ny fifandraisana miafina VPN.
Efa lasa aho izao fikarohana，fitsapana和fanandramana amin’ny VPN ho an’ny ampahany tsara kokoa amin’ny herintaona。 Na dia mety tsy ho manam-pahaizana ara-teknika amin’ny VPN aza aho，dia azoko antoka fa efa fantatro mihoatra noho ny tena tadiaviko momba ireo tolotra ireo.
Ny fanandramako dia nampiditra ny fampiasana VPNs amin’ny sehatra samihafa，anisan’izany ny apps android mobile，tranonkala mpamakin’ny navigationur ary misy适度地amin’ny fampiasana hafa。 Ny sasany dia nahagaga ahy，fa ny sasany dia diso fanantenana.
Tsy maintsy miteny aho fa amin’ny faran’ny andro，na inona na inona fahaiza-manao amin’ny vokatra iray，dia tsy misy antony tokony hanesoran’ny orinasa iray amin’ireo orinasa ireo ny fanararaotana mpanjifa ratty。 Ary Eny，Tiako，Tsy Fahaizana，Malaina Ho Toy，Ny，Fanompoana Mpanjifa Ratsy.
Windows XP，Windows XP，Windows XP，Windows XP，Windows XP，Windows XP，Windows XP，Windows XP，Windows XP，Windows XP，Windows XP，Windows XP，Windows XP，Windows XP，Windows XP，Windows XP，Windows XP，Windows XP，Windows XP，Windows XP，Windows XP，Windows XP，Windows XP，Windows XP）。 Tsara ny mahazatra，ary hitako fa matetika ny fitaovana ananantsika aty an-trano no mametra ny VPN mihoatra noho ny fanompoana.
Ny zavatra tena manan-danja nianarako momba ny fitaovana dia ny hoe raha mikasa ny hampiasa ny VPN mivantana eo amin’ny router ianao dia mila mahatsapa ny tena zava-dehibe iray-ny VPN anao dia tsy maintsy Manana processe-ass。 Matetika izy ireo no voafetra amin’ny faran’ny’oh-my-God’mpividy Wireless mpanjifa，ary na izany aza，dia voafetra ihany.
Ohatra，nanandrana VPN vitsivitsy aho tamin’ny fanandevozana Asus RT-1300UHP izay raha mety ho an’ny ankamaroan’ny trano。 Azo antoka fa afaka manatanteraka na dia ny haingam-pandeha manontolo aza（via LAN）ary hatramin’ny 400 + Mbps amin’ny WiFi。 Kanefa dia nahomby ny famoahana ny 10 Mbps raha vao natsangana ny VPN。 Tamin’izany脚趾-javatra izany，EFA Niasa Hatrany和Processeur 100％.
Ny karazana路由器mila ilaintsika dia eo amin’ny andaniny ROG Rapture GT-AC5300或Netgear Nighthawk X10-Sarotra fa tsy ny fitsipika ankapobeny ho an’ny ankamaroan’ny tokantrano。 Na dia haingana aza ny hafainganam-pandehan’ny aterineto dia ny router no hijanona ho azy.
Nanomboka ny fitsidihana VPNs amin’ny tolotra 50 Mbps izay nanome akaiky ny hafainganam-pandehan’ny adiresy-matetika aho no manodidina ny 40-45 Mbps。 Nifindra tany amin’ny安达拉纳500 Mbps aho tamin’ny farany，izay nahitako ny 80％amin’ny haingam-paneken’ny dokambarotra-amin’ny ankapobeny 400-410 Mbps.
我的照片无法显示在您的主页上，您可以在VPN maro mba hitantana izany haingam-pandeha izany noho ny antony maromaro中查看。 Anisan’izany ny fitaovana ampiasainao，ny elanelana eo anelanelanao sy mpizara VPN izay nofidinao，ny sandan’ny dikan-teny tianao，ary ny maro hafa.
Tamin’ny voalohany dia fisedrana haingana indrindra izy io，mba hitazonana rakitsoratry ny traikefa sy fanandramana ihany koa。 Raha vao nametraka fitsipika iray aho，dia nanomboka nandinika ireo tranonkala hafa na horonantsary mivantana aho。 Ho an’ny ampahany betsaka，hitako fa saika ny VPN rehetra dia afaka mamoaka horonam-peo 4k UHD.
Nesorina ihany koa ny fandalovana，ary hitako fa nisy nandiso fanantenana kely。 Heveriko fa rehefa mandeha haingana ny Internet Internet dia ho hitanao fa ny fampisehoana ny servisy VPN dia manjavona raha tsy mampiasa vola be amin’ny foto-drafitrasa tsara kokoa.
Tsy dia milalao be loatra aho（farafaharatsiny tsy ny lalao izay zava-dehibe ho an’ny fahombiazan’ny VPN）fa nanamarika ny fotoana ping。 Raha mpilalao te hanandrana mampiasa VPN ianao mba hiditra amin’ny lalao iray tsy ao amin’ny firenenao，meta ho diso fanantenana ianao。 Ny fotoana ping dia mitombo bebe kokoa noho ianao avy amin’ny服务器VPN，na dia haingana sy haingana aza ny hafainganam-pandeha.
VPN famoahana matetika（常见问题）
Mila fifandraisana Internet上网hampiasa VPN?
Ny VPN dia natao handrakofana sy hiarovana ny toerana sy ny data，saingy mbola mila fifandraisana amin’ny Internet ianao.
Ohatrinona ny vidin’ny服务性VPN?
Toa ireo mpamatsy服务回顾，纽约州VPN运营商anao hijanona miaraka零售店，satria io no fidiram-bolan’izy ireo。 Ny ankamaroan’ny mpanome tolotra VPN dia manolotrafehezan-dalànaisan-karazany玩具ny isam-bolana，isam-bolana sy ny sisa。 Matetika ny fotoana lava kokoa ny drafitra，ny mora kokoa y isam-bolana isam-bolana，fasty maintsy handoa mialoha ny fifanarahana rehetra ianao。 Manantena handoa eo anelanelan’ny $ 9 ka hatramin’ny $ 12 isam-bolana amin’ny fifanarahana isam-bolana，miaraka amin’ny fihenam-bidy hatramin’ny 75％ho an’ny fifanarahana maharitra.
Ireo VPN dia natao voalohany sy lehibe indrindra hiarovana ny mombamomba anao ary hitazona hatrany ny angon-drakinao。互联网上的数据加密，数据加密，数据加密，互联网加密。 Amin’ny maha-fitsipika ankiby，manantena fa haha​​tratra mihoatra ny 70％amin’ny hafainganao ny hafainganana rehefa mampiasa VPN。 Ny antony hafa玩具ny halaviran’ny mpizara VPN，ny vesatry ny mpizara sy ny sisa dia hisy fiantraikany amin’ny hafainganam-pandehananao amin’ny互联网mampiasa VPN.
Ny ankamaroan’ny mpanome tolotra VPN dia hilaza aminao fa tsy hametra ny hafainganao izy。 Na izany aza，mis脚趾爪哇哈法hodinihina ihany koa。 Araka ny voalaza etsy ambony，manantena ny haha​​zo mihoatra noho ny ny hafainganam-pandehan’ny tsipika.
Amin’ny mety dia tokony ho tsotra tahtra ny fametrahana fampiharana iray ary miditra ny anaraanao sy tenimiafinao。 Avy eo ny zavatra tsy maintsy ataonao dia tsindrio bokotra iray ary hatambatra amin’ny mpizara VPN ianao。 Mampalahelo fa tsy izany no vahaolana tsara indrindra和ny fifandraisana sasany dia mety mila hatsaraina ho an’ny fampisehoana tsara indrindra。 Mpanome tolotra VPN maro an’isa玩具NordVPN，Surfshark ary ExpressVPN dia hanana torolalana妈妈，ny fomba fanaovana izany，tsy hahomby izay fotoana hifandraisana amin’ireo mpiasa amin’ny serivisin’ny mpanjifa.
Miankina amin’ny mpanome服务VPN izay misoratra anarana aminao。 Saika ny mpanome rehetra dia hanohana Windows，MacOS和Linux miaraka amin’ireo sehatra finday mahazatra。 Betsaka koa no hanohana ny fampielezana ny router（）raha misy vitsivitsy mifanentana amin’ny fitaovana mana-tarehy hafa toa ny Raspberry Pi.
Satria ny 256位加密dia hampihenana ny fifandraisako betsaka，azo antoka ve amiko ny mampiasa 128位加密?
Hafakely io，卫星场Ny fanontaniana tokony hapetrakao amin’ny tenanao dia tokony ho izao：“ Ohatrinona ny ahy y fiainana manokana sy ny fiarovana ahy’min’ny互联网？”
Ny vohikala sasany dia manandrana manakana ny mpisera VPN ary manana fomba ahafantarana raha misy fifandraisana miditra avy amin’ny mpizara VPN。 Soa ihany，fantatr’ireo VPN ireo izany ary efa niatrika fanoherana izay manampy。 Tadiavo ireo mpanome fanampim-panazavana izay manolotra fanavahana，na fanimbana ny serivisy.
Azoko atao ve ny mampiasa fanitarana浏览器VPN?
Nanandrana ny fanitarana tranokala VPN vitsivitsy aho ary nahita fa ny ankamaroany dia latsaka ao anatin’ny sokajy roa lehibe。 Misy ireo izay maneho ny代理ary manaparitaka ny fifandraisanao amin’ny mpizara iray，ary ny sasany izay miasa玩具ny fifehezana navigationur amin’ny fampiharana VPN feno。 Ity farany dia midika fa mbola mila paikan’ny VPN napetraka ianao mba hampiasana ny fanitarana。 Ny fampitomboan’ny tranokala VPN dia matetika tsy vP服务.
偶氮ampiasana ve ny VPN?
埃尼亚里西亚。否，，，，，，，，，，。 Amin’ny tranga henjana be，ny firenena sasany dia tsy mandrara ny fampiasana VPN ihany fa mety hampiditra am-ponja ireo mpampiasa VPN。 Soa ihany fa misy firenena vitsy monja izay voararan’ny VPN hatramin’izao.
Tena Tsy偶氮tanterahina ve aho amin’ny VPN?
Miankina betsaka amin’ny fomba azo antoka amin’ny fampiasanao ny fifandraisana VPN sy mpanome izay nofidinao。 Nisy tranga maro izay nosamborina ireo mpampiasa ny VPN taorian’ny nametrahany ny finoany tamina mpanome tolotra iray izay namadika ny paompy mpampiasa tamin’ny farany.
Famaranana：Mila VPN ve ianao?
Ny tsiambaratelo manokana ao anaty aterineto dia iharan’ny fahirano amin’ny teboka maro ary toa nilanga tamin’ny alina izany。 Voaroaka ireo andro izay tsy maintsy hiahiahy momba ireo mpanao heloka bevava aterineto，fa ankehitriny koa dia tokony hanahy amin’ny orinasa isika Governemanta izay te hangalatra ny angon-drakitra noho izany anoky izany-.
Mazava ho azy fa tena mila VPN ny ankamaroany Miankina amin’ny firenena ao ianao，satria samy manana ambaratonga fandrahonana samihafa。 Ny fanontaniana dia tsy zavatra偶氮valiana amin’ny eny tsotra国家.
Valanjavabatry ny varotra全球VPN（arivo tapitrisa，美元）-洛哈拉诺：Statista
Na izany aza，avy amin’ny tahan’ny fitomboan’ny ny hasarobidin’ny tsena VPN manerantany，Dia hilaza aho fa tena azo inoana fa mila iray na roa na impiry ianao。 Fotoana izao no nanombohan’ny mpiserasera tsirairay nanokana ny fiainany manokana sy ny filaminana an-tserasera ho an’ny zom-pirenena ary hitady fomba ahazoana antoka ny fampahalalam-baovao.
Nahay tamim-pahatsorana tamin’ny fampiasana互联网zahay ny fomba iray izay ananantsika hatrany，fa ny mijery fotsiny no tsy misy ahiahy。 Marina fa virijiny sy恶意软件no nahatonga anay ho malina，saingy sy niova firy.
Raiso ohatra ohatra ny olona te-handeha an-tserasera ary hitady sary vitsivitsy amin’ny saka mahafatifaty。 Eo am-panaovana izany dia misy ny fampahalalana玩具ny toetrany fitadiavana azy，tiana / tsy tiany，toerana ary zavatra maro hafa nangonin’ny manam-pahefana na fikambanana。 Tsy Ampy ve izany fiheverana mampatahotra izany ve mba hanerena ireo fihetsika?
Noho izany，hoy aho hoe eny，na dia mihevitra aza ianao fa tsy mila VPN-Ianao tena marina.
Ny serivisy virtuele privaat netwerk (VPN) dia somary lohahevitra mafana amin’izao fotoana izao satria
Virtuální privátní síť (VPN) je k dispozici na několika místech, na které se můžete
Uus virtuaalne privaatvõrk (VPN) on somary lohahevitra mafana amin’izao fotoana izao satria ny tsiambaratelo